सामान्यतः युद्ध गर्नु भनेको सेनाको काम हो । तर प्राचीन चीनको सैन्य इतिहासमा एकजना साधारण मानिसले आफ्नो दक्षता मार्फत अरु राज्यबाट गरिएको आक्रमणको प्रतिकार गर्दै विजय हासिल गरेका थिए। चाउ क्वैले छि राज्यको आक्रमणको प्रतिकार गरेको लडाईंमा मुख्य व्यक्ति एक साधारण मानिस थियो।
युद्ध राज्यकालताका धेरै रजौटाहरुका शासन अन्तर्गत रहेका स-साना राज्यहरु थिए। तीमध्ये केही शक्तिशाली स-साना राज्यहरुले प्रभुत्व जमाउन खोजेका थिए। तीमध्ये छि राज्य एक थियो। छि राज्यका राजा छि हुआन् कुङले आफ्नो राज्यका सेना शक्तिशाली भएको कारण ईसा पूर्व 684मा दुर्बल लु राज्यमाथि हमला गर्नथालेका थिए। लु राज्यका राजा लु च्वाङ कुङले मरुन्जेलसम्म छि राज्यसित लडाई गर्ने दृढता गरेका थिए।
छि राज्यले लु राज्यमाथि हमला गरेकोमा लु राज्यका जनताको रोष पनि बढेको थियो। छाउ क्वै नामक एकजना साधारण मानिस थियो। उ लु राज्यका राजासित भेट गर्ने र छि राज्यका विरुद्ध लडाईंमा भाग लिने माग गर्न तत्पर भयो। केही मानिसहरुले छाउ क्वैलाई सम्झाउंदै भनेः"राज्यको ठूलो कामको वास्ता सम्बन्धित अधिकारीहरुले गर्नुपर्छ, तपाईंले किन हात हाल्ननुपर्ने?"
छाउ क्वैले जवाफ दिंदै भनेका थिएः"उच्च ओहदामा बसेका अधिकारीहरुको दूरदृष्टि नभएकाले राम्रो उपाय ननिस्केको हुनसक्ने सम्भावना निकै बढी छ। राज्य संकटमा परिरहेको देख्दा-देख्दै किन चूप लागेर बस्ने, हात किन नहाल्ने?"त्यसैले छाउ क्वैले राजदरबारको ढोका अगाडि गएर लु राज्यका राजा लु च्वाङ कुङसित भेट गर्न अनुरोध गरेका थिए।
लु च्वाङ कुङ सित भेट गरेपछि छाउ क्वैले छि राज्यको आक्रमण विरोधी युद्धमा भाग लिने अनुरोध गरेका थिए। यसका साथै उनले राजालाई पनि सोधेका थिएः "हाम्रो राज्य छि राज्यभन्दा दुर्बल र सानो छ , हजुरले केको भर परेर छि राज्यका सेनाको प्रतिकार गर्ने योजना गर्नुभएको छ? "
लु च्वाङ कुङले जवाफ दिंदै भनेका थिएः"साधारण दिनमा कुनै पनि स्वादिलो खानेकुरा वा राम्रो लुगा भएमा म एक्लैले उपभोग नगरी सधैं नै अरुसँग बाँड्ने गरेको थिएँ। त्यसैले साधारण जनताले मेरो समर्थन गर्ने कुरामा म विश्वस्त छु।" छाउ क्वैले राजाको कुरा सुनेर नाइनास्ती गर्दै भनेः"यस्ता साना-तिना सुविधा भोग गरेका मानिसहरुको संख्या थोरै मात्र थियो। त्यसैले साधारण जनताले तपाईंको समर्थन गर्दैनन् होला।"
"यज्ञ्यादि गर्दा म निकै इमान्दार थिएँ"लु च्वाङ कुङले जवाफ दिए।
छाओ क्वैले हाँस्दै भनेः "यस किसिमको इमान्दारी के कामको कुरा हो र, भगवानले तपाईंलाई सहायता गर्दैन।"
लु च्वाङ कुङले सोचेर जवाफ दिएः "साधारण जन-जातिले आफ्ना समस्याहरु जाहेर गर्दा मैले एकेक गरी स्पष्टसँग अनुगमन गर्न नसके तापनि उचित रुपमा समाधानका लागि प्रयास गरेको छु।"
छाउ क्वैले भनेः "यो कुरा जनताको मन जित्ने कुरा मात्र हो। छि राज्यसितको लडाईं जित्नका लागि यस कुराको कुनै सम्बन्ध छैन।"
चाउ क्वैले लु च्वाङ कुङसँग आफूला२ रणभूमिमा जानदिन अनुरोध गरेका थिए। लु च्वाङ कुङले छाउ क्वैको विचारमा शंका लागेका कारण छाउ क्वैको माग स्वीकारेका थिए। त्यसपछि दुबैजना एउटै सैनिक गाडीमा बसेर सेनाको नेतृत्व गर्दै रणभूमिमा गएका थिए।
चीनको प्राचीनकालमा लडाईं गर्दा सामन्यतः सैनिकहरुले मुखामुख भएर लडाईं गर्ने ढाँचा अनुरुप क पक्षले लडाईंको उद्घोषस्वरुप मादल बजाएपछि ख पक्षले पनि मादल बजाई लडाईंको उद्घोषलाई स्वीकार गरेको थियो। यदि ख पक्षले युद्धलाई स्वीकार नगरी मादल नबजाएमा क पक्षले तीन चोटि मादल बजाएपछि मात्र हमला गर्न पाउँथ्यो । लु च्वाङ कुङले हमला गर्न आदेश दिने तत्पर गर्दा छाउ क्वैले रोकेर हतारमा भनेका थिएः "हतार नगर्नुहोस, मौका आइसकेको छैन।"
छि राज्यका सेनाले दोस्रो पल्ट मादल बजाएपछि पनि छाउ क्वैले लु च्वाङ कुङलाई हतार नगर्न अनुरोध गरे। लु राज्यका सेना छि राज्यका सेनाको शेखी देखेर ज्यादै रिसाएका थिए। तर कमाण्डरको आदेश नपाएकाले रिसलाई पचाइरहेका थिए।
छि राज्यका सेनापतिले लु राज्यका सेनाले कुनै प्रतिक्रिया नजनाएको देखेर फेरि तीन चोटि मादल बजाउन आदेश दिएका थिए। छि राज्यका सेनाले लु राज्यका सेना लडाईंदेखि डराएको भन्ठानेर शेखी देखाउंदै हमला शुरु गर्‍यो।
यसै बखत छाउ क्वैले लु च्वाङ कुङलाई भनेः"अब जवाफी प्रहार गर्ने आदेश दिनुहुन्छ।"
युद्ध मोर्चामा लु राज्यका सेनाले हमला गर्ने मादल बजाउन थाले । सिपाहींले निकै शुर्‍याईं देखाउंदै जाइलागे। उता छि राज्यका सेना यस्तो अवस्था आउनसक्ने कुराको सोच नै नगरेका कारण लु राज्यका सेनाको हमलाको प्रतिकार गर्न नसकी हार खाएर भागे।
लु च्वाङ कुङले छि राज्यका सेना हारेर पछि हट्दैगएको देखेर हतारपतार गर्दै लखेटनु पर्ने आदेश दिंदा-नदिंदै छाउ क्वैले उनलाई रोकेर भने:"हतार नगर्नुहोस्"। उनले रथबाट ओर्ले पछि झुकेर छि राज्यका सेनाका रथको पांग्राको चिन्ह हेरेका थिए। त्यसको लगत्तै उनले रथमा चढेर रथमा ठड्याइएको लिंगोमा पनि चढी शत्रुहरु भागेको पंक्तितीर अवलोकन गर्दै "राजाले लखेट्ने आदेश दिएहुन्छ" भनेका थिए।
लु राज्यका सेनाले पिछा गर्ने आदेश पाएपछि वीरताका साथ अघि बढ्दै लखेट्दै एकपछि अर्को विजय हासिल गरेका थिए र अन्ता छि राज्यका सेनालाई लु राज्यको सिमानाबाट धपाएका थिए।
धैर्य र शान्त मनस्थितिका साथ छाउ क्वैले युद्धको निर्देशन गरेकोमा लु राज्यका सेनाले जवाफी प्रहार गर्दै विजय हासिल गरेको देखेर लु च्वाङ कुङको मनमा छाउ क्वैप्रति सम्मानको भाव जाग्यो। राजदरबार फर्केपछि लु च्वाङ कुङले पहिले नै छाउ क्वैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै के सोधेका थिए भनेः "शुरुमा छि राज्यका सेनाले मादल बजाएका थिए तर तिमीले तिनको सामना गर्न किन मलाई रोकेको?"
छाउ क्वैले जवाफ दिंदै भनेः "लडाईं गर्दा सिपाहीहरुको शुर्‍याईं निकै महत्वपूर्ण छ। विपक्षीले पहिलो पल्ट मादल बजाउँदा सिपाहींहरु धेरै आंटिला थिए। तर दोस्रो पल्ट मादल बजाउँदा उनीहरुको आँट अलि कम भयो र तेस्रो पल्ट मादल बजाउँदा सिपाहींहरुको आँट खतम भैसकेको थियो। विपक्षीको आँट खतम भएको बेला हाम्रा सिपाहींहरुले आँटिलो भए र यस बखत हमला गर्दा किन विजय पाउन नसक्नु त? "
त्यस पछि लु च्वाङ कुङले विरोधी सेनालाई किन तत्कालै लखेट्न नदिएको भनेर सोधेका थिए। छाउ क्वैले जवाफ दिंदै भनेः"छि राज्य एक ठूलो राज्य भएकाले त्यसका सेना हार खाएर भागेको पनि सेनाको शक्ति त छदै छ र तीनीहरु हार खाएर निहुँ मात्र गरेर भागेको पनि हुनसक्छ नि। कुनै ठाउँमा लुकेर बस्ने र प्रत्याक्रमण गर्ने सम्भावना पनि छ। यस कुरामा हामीले सावधान हुनुपर्छ। त्यसपछि उनीहरुको झण्डा यता उता ढलेका र रथका पांग्राको चिन्ह पनि निकै गडबड भएको देखेर उनीहरुको युद्ध मोर्चा पनि गोलमाल भएको विश्वास मैले गरें। त्यसैले यस बेला मैले तपाईंलाई पिछा गर्ने आदेश दिन अनुरोध गरेको थिएँ। "
यो कुरा सुनेर लु च्वाङ कुङले सपनाबाट बिउँझे जस्तै सबै कुरा स्पष्टसँग बुझे र छाउ क्वैले सम्पूर्ण कुराको सोच-विचार राम्रोसँग गरेकोमा तिनको प्रशंसा गरेका थिए।